Aniga (oo ah 14 sano jir) aad ayaan u murugaysanahay.Waxaan ka fakara waxyaabo hore.Mararka qaarkood taasi ayaa iga dhigta in aan cabsado.Mararka qaarkood ma aqaano sida aan ula sii noolaan doono.Balse waxaan ka cabsi qabaa in aan kala hadlo waalidiintayda.Yaa i caawin kara? – Tips for refugees
Kayar da'da 18? Su'aalaha?
Saaxiibadayda iyo Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaynu is-weydiinaynaa: Goorta aan dharka iska bixinayo si aan galmo u sameeyo?
Aniga oo ah (gabar, 15 sanno jir ah) waxaa igu dhacay jacayl. Waxaan qabbaa su’aalooyin aad u baddan oo ku saabsan galmada. Ma garanayo sida aan u weydiiyo. Waalidiintaydu waxay dhahaan: Anigu uma baahni in aan oggaado waxyaabaha “sidaas oo kale ah” sababtoo ah waxaan qabaa dhibaato waxbarashada ah. Dhibaatada waxbarashada macnaheedu waxay tahay: In aan u baahanahay wakhti baddan iyo caawimaad la igu caawiyo waxyaabaha qaar. Kadibna wax kasta waan fahmayaa. Qofkee igu caawin kara su’aalahayga?
Aniga oo ah (wiil,16 jir ah) waxaan leeyahay saaxiibad. Waxaynu isku jecelnahay si aad ah waxaana aad u jecelnahay in aynu isku soo dhowaano oona isla baashaalno. Hadda waxaynu doonaynaa in aynu inbaddan galmo isla samayno. Sideen ugu samayn karnaa sida saxda ah? Siduu ku geli karaa xubinka taranka raga gudaha xubinka taranka dumarka?
Walaalkayga wuxuu ii sheegay: In uu galmo la sameeyay niman. Aniga oo ah (labb, 15 sanno jir a) ma fahmayo arinkan. Ma tahay mid baashaal ah?
Aniga waxaan ahay (wiil 16, sanno jir ah) waxaan maanta galmo la sameeyay saaxiibtayda waxaana dhaawac gaarsiiyay xubinkayga taranka. Wuu jabay waxaana maqlay cod jabitaan ah. Hadda wuu bararsanyahay midabkiisana waa buluug. Aad ayuu u xanuunayaa. Miyuu iga jabay?
Aniga (oo ah 14 sano jir) aad ayaan u murugaysanahay.Waxaan ka fakara waxyaabo hore.Mararka qaarkood taasi ayaa iga dhigta in aan cabsado.Mararka qaarkood ma aqaano sida aan ula sii noolaan doono.Balse waxaan ka cabsi qabaa in aan kala hadlo waalidiintayda.Yaa i caawin kara?
Dad badan ayaa dareemaya isla sida aad dareento:
Ma oga sida ay ula noolan karaan cabsi iyo murugo.
Waxaa laga yaabaa in aysan iloowi karin waxyaabo horay ugu soo dhacay.
Waqtiyadaas oo kale, waxaad u baahan tahay caawimo.
Haddii aad ka cabsi qabto in aad kala hadasho qof adiga kugu dhow:
Markaas waxaa jira khadka tooska ah ee “Krisen-Dienst Psychiatrie” (Adeegga Dhibaatooyinka Xannuunka Maskaxda).
Khadka tooska ah waa lambar telefoon oo loogu talogalay xaalado gaar ah.
Waxaad waci kartaa marka aad dhibaato ku jirto.
Waxaad waci kartaa marka aad murugo dareento.
Waxaad ka waci kartaa khadka tooska ah teleefoon lambarka 0180 / 655 3000.
Waxaad waci kartaa lambarkaas min 9:00 ilaa 24:00.
Waalidiintaadu ma aha in ay ogaadaan.
Fadlan wac lambarkaasi.
Shaqaalaha teleefoonka ka jawaaba way ku dhageysan doonaan.
Way kula shaqayn doonaan si ay u go’aamiyaan waxa aad u baahan tahay.
Waxaan rajaynayaa, in ay ku caawin doonaan.
Posted on June 21, 2018 Author editorialteamCategories Help - Hilfe
Previous Previous post: (13, wiil) Shaley dugsiga, waxaan ku qaadanay fasalka waxbarashada galmada.Macalinka wuxuu ina tusiyay gus ka sameysan alwaax iyo jeexa sare ee siilka oo dhar ka sameysan.Waxay na tusiyeen sida ay xubnahaasi u shaqeeyaan.Waxaa la naga filayay in aanu taabano.Saaxiib ayaa igu yiri:Waa dembi.Laguuma oggola in aad waxyaabahaasi taabatoRun miyaa midaasi?
Next Next post: Aniga (oo ah 15 sano jir) waxaan u diray saaxiibkey sawir aan xiranahay hoosgashi.Wuxuu tusiyay sawirka saaxiib.Saaxiibkaas wuxuu u diray sawirka dad badan oo ardayda fasalkayga ah.Maxaa ila gudboon in aan hadda sameeyo?